2030 ခုနှစ်မှာ အရောင်းသမားတွေ ကြုံလာနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ - Sales Training Programs by Charisma
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂြိုလ်သားတွေကို ခုထိ မတွေ့ရသေးမယ့် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ သိပ္ပံပညာက အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ဘူး။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ နည်းပညာက နေရာယူဝင်လာပြီး လူသားတွေရဲ့ ဘဝကို မြန်ဆန်ချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးနေသလို မကြာသောအချိန်ကာလမှာ AI တွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ပြောရလျှင် ကွန်ပျူတာတွေက smart ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့တွေ မဖြစ်ပါဘူး။
ထို့အတွက်ကြောင့် AI တွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင် လူသားတွေ နေရာဖယ်ပေးရကိန်းရှိပြီး အရောင်းသမားတွေလည်း ဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လို့ တောင့်ခံနိုင်မှာလဲ? တချို့သော ရှေးရိုးစွဲ အရောင်းသမားတွေကတော့ ရောင်းခြင်း၊ဝယ်ခြင်း၊ဆွေးနွေးစေ့စပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းတွေသည် လူသားအချင်းချင်း လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်လို့ သိမ်မွေ့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် မကြာသေးခင်အချိန်တုန်းက Google က ပွဲထုတ်သွားခဲ့တဲ့ AI Assistant : Goolge Duplex ဟာ သူ့ဘာသာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို booking လှမ်းလုပ်တာ ကြည့်ဖူးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်းသမားတွေလည်း ဆေးမပြီးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။
Sales AI က လှမ်းခေါ်တဲ့ cold calling တွေ၊ prospecting mails တွေ၊pitch တွေဟာ လူသားတွေထက် ပိုမိုတိကျထက်မြက်နေမယ်ဆိုတာတော့ သံသယဖြစ်ဖို့လိုမယ်မထင်ဘူး
လူသားအရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဖုန်းအကြိမ် ငါးဆယ်ထက် ပိုခေါ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ Sales Cyborg တစ်ယောက်အတွက် ရာဂဏန်းအသာလေးပါ၊ ဒါ့အပြင် အီးမေးလ်ဆိုလည်း အောင်မြင်တဲ့အရောင်းသမားတစ်ယောက် တစ်နေ့ကို ရာနဲ့ချီတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပေမယ့် AI ကတော့ စက္ကန့်ပိုင်း၊မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို access လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ကြုံလာနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ အရောင်းသမားတွေသည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို မျက်ခြေမပြတ် ရင်းနှီးလေ့လာနေဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
ဒါ့အပြင် millennial တွေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်း ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တုန်းကတော့ ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည် တယ်လီဖုန်းနဲ့ အီးမေးလ်လောက်သာဖြစ်ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ SMS နဲ့သာမက လူမှုကွန်ရက်တွေကလည်း ချိတ်ဆက်နေကြပြီဖြစ်တယ်။ Face-to-face meeting တွေလည်း ရှိနိုင်သေးပေမယ့် screen ပေါ်က မီတင်းတွေပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတော့မယ်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တော်တော်များများကို digital ပေါ်ကပဲသွားတော့မှာပါ။ Cold calling လုံးဝပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေ မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းကိုင်ရတာ တွန့်တိုလာပြီး မကိုင်ချင်ကြတော့ပါဘူး။ ဖုန်းတွေတော့ သုံးနေတုန်းပဲ ဒါပေမယ့် ဖုန်းမပြောကြတော့ဘူး။
အရောင်းသမားတွေ လူမှုကွန်ရက်ပေါ် စုပြုံတက်လာနိုင်လို့ marketing နဲ့ overlap တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Niche market လို့ခေါ်တဲ့ mircromarkets ထဲ တိုးဝှေ့ဝင်လာကြပါတော့မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းတော့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာရဲ့ ဝင်ရောက်လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုကို အရောင်းသမားတွေလည်း ခံရမှာပါပဲ။
ခင်ဗျားတို့ရော…ဘယ်လိုထင်ကြလဲ? လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။